Home | Zakaat | Quraan | Siiro | Search | Saxaabo |
SOMALITALK - DENMARK
RASUULKA DIIDOW DULLOW HADDAAD DOONTANA DILAAC!!
Sayidkaan wada jecleynoow
Alla salaan wacan naga gudoomeey
Salaan wacan naga gudoomeey
Rasuul Eebow waxaad tahay Misbaax dunida ifkeeda qariyey, waxaad tahay Naxariis dunidan loo soo diray, waxaad tahay midaan nasab iyo sifo midna lagu gaareyn. Rasuul Eebow maalintaad dhalatay, maalinkii lagu boqray, maalinkaad samaawaadka aaday iyo maalintaad guuleysatayba horaa loo sii sheegay. Waxaad ku taal kutubta da’da weyn ee maanta Hinduugu uu haysto, waa lagugu amaanay, waa lagu sugayey, waad soo daahirtay nasiib xume wayse ku baal mareen.
Ayaa sanamyaduba daateenoo
Sirtii Sheydaanka laga xirayee
Waxaa ku xardhan kutubta Veda ee Hinduuga in Kalki Autar uu yahay Rasuulka ugu danbeeya Rususha Eebe, adduunkoo dhana loo soo diray. Wuxuu Adoonkani ku dhalan doonaa dhul ka durugsan Hindiya oo la yiraahdo Jasiiratul Carab. Aabihii waxaa la yiraahdaa Vishnu Bhagat, Hooyadiina Somanib. Kutubkan oo ku qoran afkii qadiimka ahaa ee Sanskrit ayaa Vishnu Bhagat ay la micne tahay Abdullahi ama Adoonkii Eebe, Somanib-na ay la micne tahay Nabad ama ammaan (Amina), Kalki Autar-na wuxuu la micne yahay Rasuul la soo diray. Kitaabka kale ee Bhavishya Purana ayaa isagu Rasuulka ku sheegaya magaciisa Mohamed (scw) iyo inuu ku hadli doono af qalaad, dhulka Carabtana ka soo bixi doono, Akhlaaq wacnaanta ayuu dad kaga tegey, cadowgiisana wuu ka guuleysan doonaa, wuxuu isku daahirin doonaa biyaha webiga Gangis buu yidhi. Dadka raacaa way is gudi doonaan, gadhkana way sii deyn doonaan, timaha dheerna dib kama xiri doonaan, wuxuu ugu yeedhi doonaa dadka Ilaah keliya in la caabudo, Aadaan ayay isugu yeedhi doonaan salaada, wax walboo loo xalaaleeyana way cuni doonaan waxaan ka ahayn Doofaarka, sida Hindida masaakiinta isku daahirisa cawska noqon maayaanee wixii ka horyimaada Diintooda surkaa maqan, magacoodana waxaa la odhan doonaa Muslimiin.
Kitaabkaas oo warkiisa sii wata ayaa Aayada 21-23 ku yidhi: “ Dil, dhac iyo boob ayaa todobada magaala ee barakeysan ee Kashi ku yaal ka batay. Hindiya waxaa degan Qabiilada Rakshas, Shabor, Bhil iyo kuwa kaloo aan xoolaha waxba dhaamin. Dhulka ay degan yihiin Malechhas ee dadkiisu ay aaminsan yihiin Malechha dharma(Islam) waa dad xikmad badan oo geesiyaal ah. Wixii wanaagsanba waxaa laga helaa dadka la yiraahdo Musalmaans, dadkanina waxay xukumi doonaan Hindiya iyo Jasiiradaheeda oo dhan. Intaasoo dhan markaad aragto Warhooy Muni-ow, Eebahaa weynee oo cibaadeyso!
Halkan laguma soo koobi karo Kitaabkaas keliya waxa ku qoran. Kuwa kale ee la midka ahna kaba daran. Sida Kitaabka la yiraahdo Atharvaveda oo isagu u badan Heeso iyo Amaan. Waxaa ka buuxa Micraajkii Nebiga, Asxaabtiisii 10-ka loogu bishaareeyey Janada iyo 10, 000 ee Maka furan doona. Waxaa ku yaala magaca Bakkah iyo cadawgii ka soo horjeeday oo ahaa dadkii Makkah deganaa oo uu Kitaabku ku qiyaasay 60, 090 iyo 20-kii boqor(Kaaba qabiil) ee ka talinayey Makkah. Kutubta kale ee lagu xusay Rasuulka (scw) waxaa ka mid ah Rigveda iyo Samveda.
Khalqiga kii u khey rsamaayow*
Dhamaan diimuhu sifeeyeenow
Rasuul Aakhiru samaanow
Kitaabkii Zabuur ayaa in badan lagu xusay Rasuulka. Zabuur wuxuu u badnaa Eebe amaan iyo qasiidooyin ay dhegeysan jireen dad iyo duunyaba. Waxaa bog walba kaaga soo baxaya sifooyinka wanaagsan ee uu Suubanuhu leeyahay, Guusha uu heli doono, Magaalada Bakkah(Makkah) iyo sida ay ummadiisu uga dul qaylin doonaan buuraha iyagoo Eebe Weyne xusaya-Labeeg Allahuma labeeg! Labeeg Laa shariika laka labeeg!
Towraad ayaa isna Rasuulka lagu xusay inuu soo bixi doono. Aad buu Nebi Muuse(cs) uga sii dardaarmay ummadiisana ugu sharxay Nebiga Aakhiru samanka soo bixi doona. Iyadoo cid waliba taa ka dheregsan tahay ayaan waxaan ka soo qaadaneynaa oo keliya sheekadii ay ka sheekeysay Xaaskiisii sharafta badnayd ee Safiya Bintu Xuyey Ibnu Akhtub. Safiya waxay ahayd Yuhuudiyad uu dhalay nin Laandheere ah oo Kaaba Qabiil u ahaa Qabiilooyinka Banu Nadir. Waxaan ahaa bay tidhi Gabadh yar oo qurux badan oo ay Aabaheed iyo Adeerkeed ay aad u jecel yihiin cid kalena aysan la hadlin haddiiba ay guriga yimaadaan ilaa ay aniga ila koodaan. Markii uu Suubanuhu yimid Madiina ayay labadoodu u tageen inay soo arkaan, maysan soo laaban ilaa gabal dhicii ayay tidhi. Markaan arkay baan la yaabay dhibaatada iyo murugada ka muuqata iyagoo caga jiidaya, markaasaan u qoslay oo aan sidii caadada ahayd ka filay inay I cayaarsiiyaan oo I qaadqaadaan. Waxaanse la yaabay sida aysan cidiba iigu jeedin ee ay labadoodu u murmayaan. Waxay igu noqotay wax la yaab leh oo aan horey iisoo marin. Adeerkey Abu Yasir ayaan maqlay isagoo Aabahay weydiinaya su’aalahan:
Abu Yasir: “Ma nebigii la sheegayey ee la sugayey ayuu ahaa?”
Aabahay: “ Haahey, waa isagii”!
Adeerkey: “ Ma naga hubtaa? Calaamadihiisii wax ma ka aragtay?
Aabahay: “ Aahey, aad iyo aad baan u aqaanaa. Aad baan u arkay wixii laga sheegayey” Adeerkey: “ Haddaba maxaad sameynasaa? Maxaad ka leedahay arrinkan?
Aabahay: “ Cadaawad baan u hayaa. Cadaawad baan u hayaa inta aan noolahay”!
Waxaa xaqiiqa ah in calaamadahan uu arkay Safiya aabaheed ay ahaayeen kuwii uu ku islaamay Ninkii Yuhuuda ugu cilmiga badnaa shiikhoodana ahaa ee la odhan jirey Abdullah ibn Salam iyo Kacab Al-Ahbar. Labadan caalimba waxay xaqiijin jireen sheekooyinka ku qoran Towraad ee uu Abdullahi Ibn Camr soo tebin jirey.
Kutubka Injiilna warkiisaba daa oo Magaca Rasuulka iyo abtirkiisa, Inuu Ummi yahay, in Jibriil u imanayo, In Akhri la odhan doono, Isna wax ma akhriyo ugu jawaabayo, Biyaha zamzamka iyo buuraha Paran, In Micraajka loo dheelmin doono, In Sanam caabudku dhamaan doono iyo inaan Rasuul kale ka danbeyn ayaa ka buuxa.
Suubanow Xabiibka Allow*
Raxmadii Saatir soo dirayow
Dhamaan saameysay dunidoo
Rasuulka intaas oo Kutub iyo kuwa kale oo aan anigu garaneyn lagu xusay ayaa ilaa qarnigii 13-aad marba sidii la doona loo sawiraa, loo cayaa, loo xumeeyaa, loo masabidaa. Qarnigani waa Qarnigii Islaamku xoogiisii uu Jabay. Waa Qarnigii laga soo xaaqay Isbeyn iyo Yurub, Waa Qarnigii ilaa Hindiya iyo Afrikaba lagu jebiyey, Waa Qarnigii Dalweynaha Mareykanka lagu gumaaday Malaayiin Muslimiin ah oo aanu u naqaan Cali Beysteen. Waa Qarnigii Malaayiin Muslimiin ah badaha laga talaabiyey oo la mariyey ciqaabtii iyo bahdilkii dunida ugu darnaa. Waa Qarni la bilaabay siyaasadii ugu sirta badneyd dunida iyo sidii uusan Islaam danbe xoog u yeelan lahayn. Waa Qarni la qorsheeyey in Muslmimiinta dunida loo daabaco Buugaag ay ka buuxaan cayda Nebiga, Diinta iyo Ilbaxnimadii Muslimiinta. Waa Qarni shida badan lahaa oo ilaa maanta na daba socda!. Ilaa iyo 70-kii dhowaa ayaa carruurta aanu dibada u dirsan jirnay la soo bari jirey in Suubanuhu uu sifooyin xunxun lahaa: Waali, Qalal, Suuxe, Iska hadle, Riyoode, Quraafaadle, Sixiroole, Dhiigyacab iwm. Waxaa ay Macallimiinta Ferenjiga
ahi ay carruurteena ku horcaayi jireen Rasuulkooda iyagoon ka hadli karin ama odhan karin Rasuulka sida u dhaama. Ilaa maanta Buugaagta laga dhigo dunida oo dhan ayaa waxaa ka maqan Siirada Rasuulka, Ilbaxnimadii Islaamka, Saynisyahanadii Islaamka iyo Halyeeyadii Dunida Islaamka. Waxaase ka buuxa kuwa Ferenjiga sida Nabilyoon, Hitler, Churchil, Kolombos, Darwin, Diigool, Bell, Newton, Dante, Notradamus, Shakespeare iwm. Waxaa naloo soo daabacay Buugaagtoodii oo aan biyo la marin. Marka Ferenjigu carruurtooda uu barayo si aad u tifatiran ayuu ugu sheegaa inay dunidan ugu sareeyaan, iyagu yihiin kuwii loo abuuray inay hantaan, lana dagaalamaan cidii ku qabsata, in dadka soo hadhay ay yihiin waxshi u dhaqma sida xayawaanka ayna muhiim tahay in la tababaro si ay dad u noqdaan oo u fahmaan sharciyadayada iyo ilbaxnimadayada. Waxay kaloo ka dhaadhiciyaan cadowgooda iyo sida uu u egyahay iyagoo baraya dhaqankiisa, diintiisa, afkiisa iyo meelaha uu ka nugul yahay.
Bureeqada kii la saaroo*
Habeen loo dheelmay samadoo
Salaadaha noola yimidoo
Haddaba cayda Suubanaha iyo aflagaadada loo geysanayo maaha wax haatan biloowday ee waxaan anigu u arkaa inay tahay fahan cusub oo Dunida Islaamku fahmayaan in haadaan laga tuuray oo ay haatan salaankii u horeeyey ay soo fuuleen. Aflagaada tii ugu xumeyd oo weliba sawir wadata ayaa waxaa sameeyey nin la odhan jirey Dante Alighieri. Durante (Dante) wuxuu ku dhashay Magaalada Florence sanadkii 1265. Markuu soo barbaaray ayuu wuxuu aad u akhristay Buug uu nin Islaam ahaa oo Reer Isbeyn ahaa oo la oran jirey Ibn Alcarabi uu ka qoray Dheelmidii Rasuulka(csw) iyo Micraajkii 20 sano ka hor intii uusan dhalan Dante. Wuxuu aad uga helay wixii ku qornaa iyo sida wanaagsan ee looga sheekeeyey Dunida naga qarsoon ee aynaan cilmiga u lahayn. Kadib, wuxuu bilaabay inuu alifo majaajilo iyo buugaag uu u bixiyey Divina Commedia (The Devine Comedy) isagoo mala awaalaya samooyinkii, Jaranjaradii, Naartii iyo Janadii uu ka akhristay Kitaabkii Ibn Carabi uu qoray. Wuxuu ka sheekeeyey dadka lagu hurinayo Naarta oo uu sawiro fool xun ka sawiray. Waxaa halkaa uu kula hadlayaa Suubanaha iyo Cali oo uu sawiray isagoo ku jeesjeesaya oo uu wax aad u fool xun oo tilmaamo ah uu ka bixinayo. Labada muuqaal ee foosha xun ee sida cadaawada ku jirta uu u taswiiray Faajirkani ayaa waxaa ku dul qoran Suubanaha Magaciisa iyo Seyidinaa Cali. Ma doonayo inaan halkan ku soo qoro wixii ku qornaa xumaanta ay leeyihiin, waxaanan aaminsanahay in aan horey loo qorin odhaahyo qof lagu tilmaamayo oo ka fool xun kuwa ninkani qoray, sawiro ka fool xuna kuwuu sawiray aan horey loo taswiirin. Magacii ba’ Dante isagaa maanta Naarta uu sheegayo calooshiisa iyo xiirmihiisu ku hurayaan cid u shafeecdana uusan haysan!
Waxaa ka sii fool xun waxan uu qoray Dante oo dharbaaxo aanu saljugle ula dhacnay ah markii Jaamacadaheena iyo Iskooladeena iyo kuwa dunidaba lagu dhigo Riwaayadii Dante iyo kuwii Shakespeare-ba iyadoo la barayo ardaygii qaadanaya Suugaanta Qadiimka ah. Waxaa iyana xusid mudan in la sheego in Dunida Islaamka badankeed aysan raacin wixii uu Suubanuhu la yimid. Waxaad arkaysaa iyagoo ka doortay warkiisii war kale ama wixii uu yidhi sameeya aan sameyneyn wixii uu yidhi iska daayana aanan ka hadhayn. Waxaa badan dadka Islaamka ah ee haddana Islaamka kale laaya, kufsada, dila, dhaca, u diida xoriyadooda, u diida diintooda, caaya Rasuulka iyo Ilaahay, Magacya xunxun ku sheega Suubanaha. Maxaanu ku sheegi karnaa kuwan? Sow taswiir xun kamay bixin Suubanaha iyo wixii uu la yimid?
Sadriga kii loo sargooyoo*
Malaa’igi ay sifeeyeenoo
Saxar iinle kaga tiginee
Suubanuhu wuxuu tolan jirey kabahiisa, dharkiisa, Gurigiisa wuu dhisi jirey, Beerta wuu fali jirey, Maryaha wuu kaban jirey. Haddaba qofka aan raacin sunadiisaas maxaanu ku tilmaameynaa. Qofkii raaca ee ku dhaqma ee lagu dhibo, lagu caayo, lagu takooro ama lagu quudhsado sow la mid maaha isagoo Suubanaihii caayey. Haddiiba uu Midgaanku ama Tumaalku bir tumo ama kabaha sameeyo, Jareerku beerta falo ama guriga dhiso, Reer Xamarku dharka tolo ama kabo maxaa loo caayayaa haddiiba intaas iyo in kabadan uu Suubanuhu sameyn jirey? Sow sawir xun lagama bixin Suubanihii sharafta badnaa?
Saliga Nebigeena wacanee*
Sadriga nuurkiisa weeyoo
Sed iyo Riixaantii weeyoo
Adaa sinji sare ka soo jeedoo
Adaa Eebahay ku saxayoo
Adaan sife lagugu gaareynee
Weligiiba Faarax ha iska hadlo!
*Qasiidadan waxay qayb ka tahay Nebi Amaan dheer oo uu curiyey Prof-Sufi Abshir Aw-Yusuf (Abshir Fisigis)
LABA KALA DARAN MID DOORO! - Walle goorey ahaataba xaqu feedhuhuu ka dillaaci!
WQ: Eelay... Guji...
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 20, 2006
BARO SIIRADII NEBI MUXAMED (NNKH)
Warar Kooban: Sawir Gacmeedyadii lagu Aflagaadeeyey Nebi Muxamed NNKH.Guji
Mudaharaadkii London, UK
Dumar reer Flastiin ah oo mudaharaadaya oo kor u sida Kitaab Qur'aan ah.
Mudaharad Looga soo Horjeedo Aflagaada loo Geystey Nebi Muxamed NNKH oo lagu Qabtay Boosaaso
Kumanaal Muslimiin reer Bangaladhesh ah oo magaalada caasimada oo k amudaharadaadaya aflagaadadii loo geystey Nebi Muxamed
Reer Siiriya oo sii wada mudaharaadka
Reer Joordan oo k amudaharadaada sawir gacmeedka lagu aflagaadeeyey Rasuulka
Ciraaqiyiin ku timanaya calanka Denmark
Muslimiinta Indonesia oo gubya calanka Denmark
Muslimiin Arbacadii ku hor mudaharaadaya safaarada Denmak ee Ankara.. Washintonpost
Sawir gacmeedyadu waxay meel uga dheceen 1.3billion oo Muslim ah